लगानी सम्मेलनको तयारी | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय लगानी सम्मेलनको तयारी
on: २५ पुष २०७५, बुधबार ०५:१३ सम्पादकीय
चैतको दोस्रो साता हुने नेपाल लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुट्न सरकारले नेपाली दूतावासहरूलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गरिने यस्तो सम्मेलन प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अरू देशमा भएको पनि छ । तर, लगानीकर्ताले नेपाललाई नपत्याएका कारण विगतको प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्रिएन । प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ : अब यो सम्मेलनबाट चाहिँ लगानी भित्रिएला त ?
केही राजदूत व्यापार व्यवसाय हाम्रो जिम्मा होइन, कूटनीतिक औपचारिकता मात्र हाम्रो सरोकार हो भन्ने सोचमै साँघुरिएर बसेका छन् ।
कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि त्यस देशका कानूनहरू लगानीका लागि कत्तिको उपयुक्त छन्, मुनाफा गर्न र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजान कत्तिको सहज छ भनेर कानूनी व्यवस्था नै हेर्छन् । तर, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ने कानूनी कमजोरी प्रशस्त छन् । लगानी सम्मेलन हुनुअगाडि नै नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अथवा संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो काम गरिसक्नुपर्छ । केही कानून संसद्मा दर्ता भइसकेका पनि छन् । तिनमा थप सुधार गरेर लगानी अनुकूल हुने गरी संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्छ । अर्को, न्यायिक निर्णयहरू पनि लगानीकर्ताले लिने निर्णयका आधार हुन् । अदालतले समयका निर्णय नदिने र दिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने प्रचलन नेफेरिएसम्म लगानी भित्रिँदैन, प्रतिबद्धता मात्रै आउँछ । उदाहरण हाम्रै सामु छ ।
सरकारले राजदूतहरूलाई निर्देशन त दिएको छ । तर, कोरा निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालसँग केकस्ता परियोजना छन्, तिनमा सम्भावित मुनाफा कस्तो छ, प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन् भन्ने बारे राजदूतहरूलाई प्रशिक्षित नै गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई लगानी परियोजनाका बारेमा केकस्ता सामग्री उपलब्ध गराइएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त निर्देशनभन्दा पनि राजदूतावासलाई सक्षम नै बनाउनुपर्छ । कतिपय राजदूतले पर्याप्त बजेट नभएकाले आफू कार्यरत देशका व्यवसायीहरूस“ग सम्पर्क गर्न गाह्रो भएको दुःखेसो पोखेका छन् । अझ केही राजदूत त व्यापार व्यवसाय हाम्रो जिम्मा होइन, कूटनीतिक औपचारिकता मात्र हाम्रो सरोकार हो भन्ने सोचमै साँघुरिएर बसेका पनि छन् । तिनलाई राजदूतको कर्तव्यबोध गराउनु पर्ने त छँदै छ ।
यति भन्दाभन्दै पनि सबैभन्दा मुख्य कुराचाहिँ सरकारको विश्वसनीयता नै हो । नेपालकै लगानीकर्ताहरू सरकारप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले कसरी पत्याउलान् ? सरकारप्रति विश्वासको वातावरण त्यति बेला तयार हुन्छ जति बेला सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्छ । नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरू नयाँ लगानीकर्ताका लागि सूचनाका माध्यम हुन् । पुरानाले लगानी थपिरहेका छैनन्, उल्टै लगानी फिर्ता लगिरहेका छन् भन्ने थाहा पाएपछि कोही पनि विदेशी लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । नेपालमा लगानी गर्न आएका डांगोटे र रिलायन्स सिमेन्ट किन त्यतिकै फर्के ? कन्साइ निरोल्याकले केकस्तो हन्डर बेहो¥यो जस्ता प्रश्न उनीहरूको दिमागमा तुरुन्त आइहाल्छ ।
नेपाल लगानीकर्ताहरूका लागि मुनाफायोग्य ठाउँ हो । पूर्वाधार निर्माणदेखि सेवा क्षेत्रसम्म लगानीको प्रशस्त ठाउँ छ र मुनाफा हुने आधार पनि छ । तर, लगानी सम्मेलनको तयारी सरकारले कसरी गर्छ र दूतावासहरूलाई कसरी परिचालित गर्छ त्यसैमा सम्मेलनको सफलता निर्भर हुन्छ । सफलताको शुभकामना !